Izakhiwo Zomphakathi - China Zhenyuan Steel Structure Engineering Co., Ltd.
Ukwakheka kwendawo, ukuklanywa okusebenzayo, ukuqoqwa kwesixuku kanye nokususwa kwezakhiwo zomphakathi, kanye nokukalwa, ukwakheka nemvelo ebonakalayo (ubuningi, ukuma nekhwalithi) yesikhala. Phakathi kwabo, ukugxila okuvelele kuyimvelo yokusetshenziswa kwesikhala sokwakha nemisebenzi yokuqondisa izinto.
Yize ubunjalo nohlobo lokusetshenziswa kwezakhiwo zomphakathi ezahlukahlukene zihlukile, zingahlukaniswa zibe izingxenye ezintathu: ingxenye enkulu yokusetshenziswa, ingxenye yokusebenzisa okwesibili (noma ingxenye esizayo) nengxenye yokuxhunywa kwethrafikhi. Ekuklanyeni, kufanele siqale siqonde ubudlelwane balezi zingxenye ezintathu ekuhlelweni nasekuhlanganisweni, futhi sixazulule ukuphikisana okuhlukahlukene ngakunye ukuze kutholakale ubungqabavu nokuphelela kobudlelwano obusebenzayo. Ebudlelwaneni obukhona balezi zingxenye ezintathu, ukwabiwa kwendawo yokuxhuma ithrafikhi kuvame ukudlala indima enkulu.
Ingxenye yokuxhunyaniswa kwethrafikhi ingahlukaniswa ngokuvamile ibe yizinhlobo ezintathu eziyisisekelo zendawo: ithrafikhi evundlile, ithrafikhi eme mpo kanye nehabhu traffic.
Amaphuzu Ayinhloko Ovundlile Wokuhlelwa Kwethrafikhi:
Kufanele iqonde, ivikele ukusonta nokujika, ihlobane kakhulu nengxenye ngayinye yesikhala, futhi ibe ngcono ukukhanya kwemini nokukhanyisa. Isibonelo, i-walkway.
Amaphuzu Abalulekile Wokuma Kwethrafikhi Eme mpo:
Indawo nobungako buya ngezidingo zokusebenza nezidingo zokulwa nomlilo. Izosondela endaweni yezokuthutha, ihlelwe ngokulinganayo ngamaphoyinti aphansi nasesekondari, futhi ilungele inani labasebenzisi.
Amaphuzu Abalulekile Wokuhlelwa Kwehabhu Lezokuthutha:
Kuzoba lula ukusetshenziswa, kufanelekile esikhaleni, ukwakheka okunengqondo, ukuhlobisa okufanele, ukonga nokusebenza ngempumelelo. Kokubili umsebenzi wokusetshenziswa nokwakhiwa komqondo wobuciko womhlaba kuzobhekwa.
Ekuklanyeni kwezakhiwo zomphakathi, kucatshangelwa ukwabiwa kwabantu, ukuguqulwa kwenkomba, ukuguqulwa kwesikhala nokuxhuma nezikhala, izitebhisi nezinye izikhala, kuyadingeka ukuhlela amahholo nezinye izinhlobo zesikhala ukudlala indima yezokuthutha ihabhu nokushintsha kwesikhala.
Idizayini yokungena nokuphuma kwehholo lokungena ngokuyinhloko isuselwa kuzimfuneko ezimbili: eyodwa iyizidingo zokusetshenziswa, kanti enye iyizidingo zokulungiswa kwesikhala.
Ukuhlukaniswa Komsebenzi Osebenzayo Kwezakhiwo Zomphakathi:
Umqondo wokuklanywa kokusebenza ukuhlukanisa izikhala ngokuya ngezidingo zokusebenza ezahlukahlukene, nokuzihlanganisa futhi uzihlukanise ngokusondela kokuxhumana kwazo;
Izimiso zokuklanywa okusebenzayo yilezi: ukwabiwa kwezindawo okusobala, ukuxhumana okulula, nokuhleleka okunengqondo ngokusho kobudlelwano phakathi kwezikhulu, ezesibili, zangaphakathi, zangaphandle, ezinomsindo nezithuleyo, ukuze ngamunye abe nendawo yakhe; Ngasikhathi sinye, ngokuya ngezidingo zangempela zokusetshenziswa, indawo izohlelwa ngokokulandelana kwemisebenzi yokugeleza kwabantu. Inhlanganisela nokwehlukaniswa kwesikhala kuzothatha isikhala esikhulu njengomgogodla, futhi ukuhlelwa kwesikhala sesibili kuzonikela ekusebenzeni komsebenzi omkhulu wesikhala. Isikhala sokuxhumana kwangaphandle sizobe siseduze nehabhu lezokuthutha, futhi isikhala sokusetshenziswa kwangaphakathi sizofihlwa. Ukuxhuma nokuhlukaniswa kwesikhala kuzophathwa kahle ngesisekelo sokuhlaziywa okujulile.
Ukukhishwa kwabantu ezakhiweni zomphakathi:
Ukususwa kwabantu kungahlukaniswa ngezimo ezijwayelekile neziphuthumayo. Ukuphuma okujwayelekile kungahlukaniswa kube okuqhubekayo (isb. Izitolo), kwenziwe indawo eyodwa (isib. Izinkundla zemidlalo yaseshashalazini) futhi kuhlanganiswe (isib. Amahholo embukiso) Ukukhishwa okuphuthumayo kuphakathi nendawo.
Ukukhishwa kwabantu ezakhiweni zomphakathi kuzoba bushelelezi. Ukuhlelwa kwendawo yebhafa kuhabhu kuzobhekwa, futhi kungahlakazeka kahle lapho kunesidingo ukuvimbela ukuminyana ngokweqile. Ngemisebenzi eqhubekayo, kufanelekile ukusetha ukuphuma nokuphuma kwabantu ngokuhlukile. Ngokuya ngekhodi yokuvikela umlilo, isikhathi sokufuduka sizobhekwa ngokuphelele bese kubalwa umthamo wamathrafikhi.
Ukubekwa kobuningi, ifomu nekhwalithi yesikhala esisodwa:
Usayizi, umthamo, ukuma, ukukhanyisa, ukungena komoya, ukukhanya kwelanga, izinga lokushisa, umswakama nezinye izimo zesikhala esisodwa yizici eziyisisekelo zokufaneleka, futhi futhi kuyizici ezibalulekile zezinkinga zomsebenzi wokwakha, ezizocatshangelwa ngokuphelele ekwakhiweni.
Izakhiwo zomphakathi zifaka phakathi izakhiwo zamahhovisi, amahhovisi eminyango kahulumeni, njll. Izakhiwo zebhizinisi (ezinjengezinxanxathela zezitolo kanye nezakhiwo zezezimali), izakhiwo zabavakashi (njengamahhotela nezindawo zokuzijabulisa), isayensi, ezemfundo, amasiko nezakhiwo zezempilo (kufaka phakathi amasiko, imfundo, ucwaningo lwesayensi, ukwelashwa, ezempilo, izakhiwo zezemidlalo, njll.), izakhiwo zokuxhumana (njengokuthunyelwe nokuxhumana ngocingo, ezokuxhumana, izikhungo zedatha namakamelo okusakaza), izakhiwo zezokuthutha (njengezikhumulo zezindiza, iziteshi zesitimela ezihamba ngesivinini esikhulu, iziteshi zesitimela, izitimela ezingaphansi komhlaba neziteshi zamabhasi) nezinye